‘सारेगमप’मा तहल्का मच्चाउँदै नेपालका दुइ बाल प्रतिभा प्रितम र आयुष:हेर्नुहोस – SagunKhabar
‘सारेगमप’मा तहल्का मच्चाउँदै नेपालका दुइ बाल प्रतिभा प्रितम र आयुष:हेर्नुहोस
By sagunkhabar On Apr 13, 2019
काठमाडौं। भारतका लाखौ बाल कलाकारहरुबाट छानिएर आएका गायनमा रुची भएका बाल कलाकारहरु यतिबेला चर्चित सिङ्गीङ रियालिटी शो सारेगमप लिटिल च्याममा आफ्नो जोडदार प्रस्तुति दिदै आफ्नो हुनर देखाइरहेका छन् ।
खुसीको कुरा त के छ भने उक्त चर्चित शोमा नेपालका दुइ होनहार बाल प्रतिभा पनि सामेल छन् । भक्तपुर् ठिमीका आयुष केसी र इटहरी नेपालका प्रितम आचार्यले उक्त शोमा सहभागिता मात्र जनाएका छैनन् आफुलाई शोको मुख्य दाबेदारका रुपमा साबित गर्दै आएका छन् ।
विभिन्न ठाउमा अडिसन गर्दै शुरु भएको सारेगमप लिटिल च्याममाको ताजा समिकरणमा टप १४ को टुंगो लागेको छ । अघिल्लो हप्ता टप १५ मा पुगेका प्रतिस्पर्धीको बिचको केहि हप्तामा भएको प्रस्तुतिलाई जज र जुरिजजले गरेको निर्णयका आधारमा टप १४ को टुंगो लागेको हो । विभिन्न किसिमका गीत गाउन सक्ने ट्यालेन्ट प्रतिभाबाट छानिदै टप १४ मा नेपालका प्रितम आचार्य र आयुष केसी पनि पुग्न सफल भएका छन् ।
निकै सुरिलो स्वरका धनि प्रितम र आयुषले आफ्नो गायनमा सबैलाई फिदा बनाएका छन् । यतिबेला उनिहरुको चर्चा भारत,नेपालमा मात्र देश बिदेशमा भइरहेको छ । बिशेष गरेर संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुले नेपाली बाल कलाकारले हासिल गरेको सफलताले गर्व महसुस गरेका छन् ।
भारतमा चलिरहेको चर्चित शोमा सहभागिता जनाएर टप १४ मा पुग्दै आफुलाई अब्बल साबित गर्दै जानु चानचुने कुरा पक्कै होइन । नेपाली भाषा बोल्ने उनीहरुले हिन्दि भाषाको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु र हिन्दि गीत गाउनु आफैमा चुनौती हो ।
त्यो चुनौती र भाषिक कठिनाइका बाबजुत पनि प्रितम र आयुषले गरिरहेको संघर्ष र हासिल गरिरहेको सफलताको अगाडी सबै नेपाली नतमस्तक भएका छन् । आगामी दिनमा प्रितम र आयुषलाई सफलताको शुभकामना !
विवाहित महिलाले परपुरुषसँगअबैध सम्बन्ध राख्नुका कारण यस्ता छन्:हेर्नुहोस भिडियो सहित
कुलमान कडकिए – लोडसेडिङ हुन दिन्न, अफ्ठ्यारो पार्नेलाई नाङगेझार पार्छु:हेर्नुहोस भिडियो सहित
६५० करोड बढी सम्पतिका मालिक हुन् अल्लू ! जुत्ता र कपडामा मात्रै खर्च गर्छन् करोडौं !
हनिमुन मनाउन फ्रान्स पुगेका वर्षा र सञ्जोगले शेयर गरे यस्ता रोमान्टिक तस्बिर !
यी हुन् साउथ फिल्मका सबैभन्दा महँगा अभिनेताहरु , जसको पारिश्रमिक सुन्दा नै परिनेछ…
नायिका साम्राज्ञी देखिईन् ‘बोल्ड’ रुपमा,
श्वेता तिवारीकी छोरीले चार वर्षको उमेरमै गरेकी थिइन् यस्तो काम, बुवाले खोले…
‘डान्स इन्डिया डान्स’मा महँगा जज अभिनेत्री करिना कपुर, पारिश्रमिक कति ?सुनेर तपाइको…
मामु म बाच्न चाहन्छु भने पछी बाबा मामुले आखामा आशु सम्हाल्न सकेनन्,सहयोगी अनि कोमल…
मामु म बाच्न चाहन्छु भने पछी बाबा मामुले आखामा आशु सम्हाल्न सकेनन्, ब्लड क्यान्सर पिडित नुवाकोटकि आठ वर्ष कि आशिमा…